Vaovao - Nanangana fiaraha-miasa am-pirahalahiana faharoa amin'ireo mpanjifany Hong Kong
Nanangana fiaraha-miasa namana faharoa miaraka amin'ny mpanjifany Hong Kong
Tamin'ny Mey 2021, mpanjifa Hong Kong izay nanafatra vokatra famonoana otrikaretina avy amin'ny orinasa dia nandidy andiany iray famonoana otrikaina fanosorana lenaavy amin'ny orinasa. Noho ny fiaraha-miasa teo aloha dia nandeha tamim-pilaminana ny filaharana fanesorana ny fanadiovan-tsakafo ho an'ny fanadiovana. Nandritra ny fiaraha-miasa tamin'ny mpanjifany Hong Kong dia nanana fifandraisana an-tsoratra nandritra ny herinandro vitsivitsy izahay, ao anatin'izany ny fifandraisana amin'ny antsipiriany amin'ny lafiny maro toy ny famaritana ny vokatra, ny akora, ny kitapo fonosana, ny famolavolana sary, sns., Ary ny roa tonta dia afaka mamaly ara-potoana isaky ny valiny ary fifanakalozana, ka azo hamaranana haingana ny Varotra, hanafainganana ny fahombiazan'ny fiaraha-miasa eo amin'ny roa tonta. Taorian'ny fifandraisana sy ny fanamafisana dia nandefa santionana boaty 1 tamin'ny mpanjifa izahay, nangataka tamin'ny mpanjifa mba hanao ny fizahana sy ny tatitra momba ny fanandramana ary nandefa ny mpanjifa ny mari-pahaizana amin'ny famokarana sy ny asa ary ny mari-pahaizana hafa mifandraika amin'izany, izay eken'ny mpanjifa haingana. , ary avy hatrany dia nandidy boaty 20 000, an-tsambo Ship. Taorian'ny fahatongavan'ireo vokatra, ny mpanjifa dia nanome fanohanana matanjaka sy fanekena ny kalitao sy ny hafainganan'ny famokarana ny vokatry ny orinasa.
Alohan'ny hamokarana ny vokatra tsirairay, ny mpiasa mpamokatra atrikasa dia hanao fitsapana momba ny fitaovana sy ny milina. Ny fitsapana tsirairay dia maharitra 5-10 minitra. Rehefa vita ny fitsapana ny masinina dia handeha any amin'ny atrikasa fanadiovana izy ireo hamokarana. Aorian'ny famokarana ny vokatra dia hisy inspektera fanindroany. Hamarino mba hisorohana ny fivoahan'ny fonosana na ny olan'ny kalitaon'ny vokatra. Rehefa vita ny fitsirihana faharoa vao fenoina sy halefa any amin'ny mpanjifa. Ny ranona ampiasaina amin'ny famokarana solo-drano lena dia dinihina sy novolavolain'ny mpiasa matihanina sy teknika. Nandalo fitsapana ara-teknika henjana izy io ary misy tatitra fanaraha-maso feno, mba hahazoanao antoka kokoa ny vokatray.
Ny fototry ny fiaraha-miasa eo amin'ny Yantai Haicheng Sanitary Products Co., Ltd. sy ny mpanjifany dia antoka ara-kalitao, antoka ny hafainganam-pamokarana ary fiantohana ny vidiny. Ny mpanjifa rehetra eto dia hahazo vokatra tsara indrindra sy tolotra tsara indrindra ary afaka mamokatra vokatra mahafa-po indrindra amin'ny mpanjifa. Tsy misy fahasamihafana eo amin'ny vidiny faharoa an'ny mpampisolo tena, amin'izay ny mpanjifa rehetra mahatsapa fa mendrika ny sandam-bola. sandany Ny fiaraha-miasa tsara dia tsy azo sarahina amin'ny fiaraha-miasa sy ezaka ataon'ny roa tonta. Amin'ny alàlan'ny fiaraha-miasa ihany no ahafahantsika manatratra tarehin-javatra mandresy.